Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeBahamas Breaking » Yintoni entsha eBahamas ngoNovemba
Airlines • uhambo ngomoya • Iindaba zeBahamas Breaking • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iindaba • Resorts • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Zifudumeze izicwangciso zakho zokuhamba ngeeholide kweli xesha lonyaka. Ngamaqondo obushushu aleenjiko, iindawo ezintsha ezichulumancisayo kunye nezikwekhilomitha ezili-100,000 zawona manzi acocekileyo ehlabathi, kulula ukuxelela intsapho yakho isizathu sokuba “Kungcono eBahamas.”
Ngaphezulu kweziqithi ezingama-700 kunye neendawo ezili-16 zeziqithi ezikhethekileyo, iBahamas ilele kumgama oziikhilomitha ezingama-50 ukusuka kunxweme lwaseFlorida, inika indlela yokubaleka ngokulula.
Iziqithi zaseBahamas zinokuloba okukumgangatho wehlabathi, ukuntywila, ukukhwela isikhephe, ukukhwela iintaka, kunye nemisebenzi esekwe kwindalo.
Kukho amawaka eemayile awona manzi anomtsalane oMhlaba kunye neelwandle ezicocekileyo ezilinde iintsapho, izibini kunye nabahambi.
I-Coral Vita Izuze iNkolelo kwiinzame zayo zokuzinzisa kwendalo- Coral Vita ifumana i-15 ephezulu yabaphumeli bokugqibela kuMvuzo wokuQala we-Earthshot kudidi oluthi “Vuselela iiLwandle Zethu” ngeenzame zabo eziqhubekayo zokulondoloza inkqubo yendalo engaselunxwemeni yehlabathi.
Iimbadada ezicingisisiweyo zasebukhosini baseBahamian zilungiselela ukuphinda zivulwe - Iimbadada iRoyal Bahamian isendleleni yokuphinda ivulwe nge-27 kaJanuwari 2022, kwaye iindwendwe zinokulindela ukonwabela amagumbi angama-200 ahlaziywe ngokupheleleyo kunye neesuti, iindawo zokutyela ezintlanu ezintsha, iindawo zokufihla isiqithi zabucala kunye neLali entsha yase Island.
I-Rosé Paradis Garden Ivula kwiKlabhu yase-Ocean, iNdawo yokuchithela iiholide eZine -Iklabhu yoLwandlekazi, iNdawo yokuchithela iiholide ezine, ibambisene neChâteau d'Esclans ukuza kuthi ga ngoku. Igadi yaseRosé Paradis, amava epop-up amnandi ahambisa iindwendwe ukusuka kwiGadi edumileyo yaseVersailles yeParadise Island ukuya kuMazantsi eFransi. Amava avulwa ngoLwesithathu ukuya ngoMgqibelo, ngoNovemba 11, 2021, ukuya kutsho ngoFebruwari 11, 2022.
I-Moorings Iphinda Ivulwe kwi-Abacos kwinyanga ezayo - IiMoorings ibuyela e-Abacos emva kweminyaka emibini emva kwentshabalalo yeNkanyamba iDorian kwaye iza kuphinda inikezele ngeeholide zokuthengisa ukuqala kukaDisemba ka-2021.
Bahamas Charter Yacht Show Returns – Kusemthethweni, i 2022 Bahamas Charter Yacht Show iya kubanjelwa eNassau Yacht Haven ngoFebruwari 24 – 27, 2022 ineeyacht eziqashisayo ezingaphezu kwe-10 kunye nangaphezulu kwama-40 abathengisi.
IBahamas Ikhazimle ngokuQinisekile ngokuQoqoshwa kweHlabathi -Iziqithi zeBahamas zagoduka neempumelelo ezininzi kwiindidi ezahlukeneyo Umhambi wendlela uCondé Nast Abafundi baka-2021 IiMbasa zokuKhetha kwaye kwathiwa "Isiqithi esihamba phambili seSiqithi seLuxury se-2021” kuMbasa wama-28 onyaka wokuHamba ngeHlabathi.
Uluhlu olupheleleyo lwezivumelwano kunye neephakheji zeBahamas, tyelela apha.
Isiqithi saseAtlantis Paradise sibonelela ngePhakeji eKhethekileyo "Yosuku olulodwa". - Isiqithi saseAtlantis Paradise sibhiyozela uSuku lweSizwe lwabangatshatanga ngoNovemba 11, 2021 ngesipho esikhethekileyo esibhukishwayo seeyure ezingama-24. Ipakethe ye "Singles Day" ibandakanya ukuya kuthi ga kwiintsuku ezi-4 zokuhlala kwi-Cove, iRoyal kunye neCoral, ngokulandelelana, kunye ne-111 yeedola zetyala lemihla ngemihla. Ifestile yokuhamba: Novemba 11 - Okthobha 31, 2022.
$500 Air Credit for Black Friday kunye Cyber ​​ngoMvulo – Abahambi ngeholide bafumana a Ityala lomoya elingama- $ 500 xa ubhukisha kwangaphambili iphakheji yomoya equka ubusuku obu-7 kwihotele yelungu leBhodi yeBhodi yeBahama Out Islands ethatha inxaxheba. Inokubhukishwa phakathi komhla wama-26 kuNovemba ukuya kuDisemba 2, 2021, kwaye iyasebenza kuhambo oluphakathi komhla wama-28 kuNovemba ukuya kowama-31 kuJanuwari 2022. Imihla yokucinywa kwetyala iyasebenza.
Ngaphezulu kweziqithi ezingama-700 kunye neendawo ezili-16 zeziqithi ezikhethekileyo, iBahamas ilele kumgama oziikhilomitha ezingama-50 ukusuka kunxweme lwaseFlorida, inika indlela yokubaleka elula ehambisa abahambi kude nemihla ngemihla. IZiqithi zaseBahamas zinokuloba okukumgangatho wehlabathi, ukuntywila, ukukhwela isikhephe, ukukhwela iintaka, kunye nemisebenzi esekwe kwindalo, amawaka eemayile awona manzi anomtsalane oMhlaba kunye namanxweme acwengileyo alinde iintsapho, izibini kunye nabahambi. Jonga zonke iziqithi onokuthi unikeze kuzo bahamas.com Okanye kwi Facebook, YouTube or Instagram ukubona ukuba kutheni kungcono kwiiBahamas.